Abtidoon oo Eebe Tuugay in uu Nabad Kaga Tago Eritrea iyo Jwxo-shiil oo Baasboorkii Laga Qaaday – Rasaasa News
Abtidoon oo Eebe Tuugay in uu Nabad Kaga Tago Eritrea iyo Jwxo-shiil oo Baasboorkii Laga Qaaday
“Dawaco meeshii ay macal uga baratay ayey ku macluushaa”, miisaalkaa waxaa galay kooxda kadeedan ee Jwxo-shiil, oo qaarkood iyagu diriqi kaga soo baxsaday Eritrea iyaga oo kabna luli kabna laad laadin.
Todobaadyo ka hor ayey ahayd kolkii ay warbaahintu qortay in qaar ka mid ah garabyada ururada Axmaarada, OLF iy ONLF oo aan isku mabaa,diiba ahayn la sheegay in lagu midayn doono xarunta dalka Eritrea inta ka horeysa dhamaadka bisha fooda inagu soo haysa ee sanadka cusub.
Dalka Eritrea oo lagu timaamo in ay tahay camadhka Afrika, xornimo siinteeduna a ahay khalad dhacay ayeyna masuuliyiinteedu lahayn waji loogu soo hagaago, aduunkuna uu haatan muujiyey in ay tahay xiligii uu gacmaha ka laaban lahaa.
Arintaa kolkii ay maqahay ayey bilowday in ay dad cudhaadh u qabsato, inta haaan la og yahay dadka ay cudhaadha u qabsatay ee koxihii la joogay ayaa waxaa ka mid Jwxo-shiil. Sida ay warar hoose tibaaxayaan Jwxo-shiil ayaa waxaa laga qaaday warqadihii dhoofiaanka, iyada o kolkii horeba loo malmal cunsanaa, markii uu diidmo muujiyey soo jeedin ahayd in uu xilka ku wareejiyo Abtidoon oo isaga laftigiisu ku dhicilahaa qisadii Ugaas Galab, hadiiba uu xilka ka qaadi lahaa Jwxo-shiil.
Abtidoon iyo laba ka mid ah urarada kale, sugayeyna in la siindoono xilalka ugu sareeya marka ay Eritrea midayso ururada aan waxba isaga danta ahayn ee kala ujeedada ah. Abtidoon iyo kuwa la socday ayaa nasiib kaga soo baxsaday ciidanka sirdoonka ee Eritrea ka dib kolkii ay ogaadeen in meesha gabar ka malaasnayn.
Abtidoon oo shaqdiisii kalkaaliye macalin kumuuniti kolkii hore uga tagay kor baad aadi ayaa eega waxaa shaqo la,aan darteed mijin ka tuugaaya Mustafe Faarax oo ay minankoodu isu muuqdaan.
Abtidoon ayaa waxaa London ku weheliya Macalin Diirane oo isagu lafihiisa ug baqay dad cunka ay haatan Eritrea dabartay.
Ma la Socotaa in Jwxo-shiil, Dhalinyarada Somalida Ogadeeniya ee Cwxo uu u Gumeeyey Eritrea?
Qayb 2aad, Ma la Socotaa in Jwxo-shiil, Dhalinyarada Somalida Ogadeeniya ee Cwxo uu u Gumeeyey Eritrea?